လျှပ်စစ်ကွန်ယက် Switchgear ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအတွက် China Brown Contact Box အချိန်ဇယား
Vacuum Circuit Breaker သည်
အိမ်တွင်း Vaccum Circuit Breaker
ပြင်ပ Vaccum Circuit Breaker
Earthing Switch ပါ
အာရုံခံကိရိယာ & Insulator
Electrical Network Switchgear အတွက် Brown Contact Box
မူရင်းနေရာ Zhejiang၊ တရုတ်
ပစ္စည်း: epoxy resin
ဆန့်နိုင်အား: > ၁၀ ကီလို
1. ထုတ်ကုန်သည် epoxy resin ပစ္စည်းကိုလက်ခံသည်
2. ၎င်းသည်လျှပ်ကာ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုမြင့်မားစေသည်။
၃။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုပေးသည်
၄။ အဆက်အသွယ်သေတ္တာကို APG နည်းပညာဖြင့် epoxy ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်
မော်ဒယ်အမည်: CH3-24/225 ဆက်သွယ်ရန် Box
အမျိုးအစား: ဆက်သွယ်ရန် Box
လျှောက်လွှာ ဗို့အားမြင့် / Switchgear
အရောင်: အညိုရောင်၊ အနီရောင်
ကုန်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် CE နှင့် ISO 9001: 2000
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား ၂၄ ကေဗွီ
ထုပ်ပိုး: 1. တစ်ခုစီကိုပလတ်စတစ်ဖလင်ဖြင့်ထုပ်ထားသည်။ ပုံးများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသော 3. သေတ္တာများကိုသစ်သားသေတ္တာတစ်လုံးထဲတွင်အလုံပိတ်ထားသည် ၄ ​​င်းကိစ္စများတွင်သံခါးပတ်များဖြင့်အပြင်ပိုင်းတွင်ချည်နှောင်ထားသည်။
ဆိပ်ကမ်းကိုဖွင့်နေသည် ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်း / Ningbo ဆိပ်ကမ်း
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ L/C, T/T, Western Union
ပို့ဆောင်ချိန်: ၁၅ ရက်အတွင်းအော်ဒါပမာဏပေါ်မူတည်သည်
1. OEM ကိုကြိုဆိုပါသည်
2. အရည်အသွေးမြင့် & အချိန်မီပေးပို့
4. ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနှင့် Specification မျိုးစုံတွင်
၁။ အတွင်းပိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း အမြင့်: ≤1000m.3 ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: +40 ° C ~5° C.4 ။ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆသည်+၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်တွင် ၈၅%ထက်မပိုစေရ။ အဆက်အသွယ်သေတ္တာ၏အကာအကွယ်ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်သောဓာတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့သို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များမပေါက်ကွဲစေရ
ကျွန်ုပ်တို့သည် 12KV, 24 KV, 36KV နှင့် 40.5KV switchgear bushing, contactor box, insulators, transducers ကဲ့သို့ epoxy resin အလတ်ဗို့အားနှင့် high voltage components များပေါ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်သည်။ 630A, 1250A, 2500A, 3150A and 4000A contactor box, club contact, fix contact, arm contact and jaw contact ။ 630A နှင့် 1250A VS1 circuit breaker 630A နှင့် 1250A ZN85-40.5 circuit breaker 12KV နှင့် 24KV earth switch KYN28A-12 နှင့် KYN61 ဗို့အားမြင့် switchgear အစိတ်အပိုင်းများ
ယခင်: Busbar Insulator သည် High Voltage post insulator ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: အဆက်အသွယ်ကိစ္စတွင် Insulating Epoxy resin switchgear
Compound Insulator များ
Epoxy Resin သေတ္တာ
Epoxy Resin ဆက်သွယ်ရန် Box
Switchgear အတွက် Insulation Contact Box
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် 24kv insulatorium contact box ...
ABB Switchgear ဆက်သွယ်ရန် Box circuit breaker
1.4m ကက်ဘိနက်အတွက် Bent Plate Epoxy Resin
40.5kv Shielding Contact Box အတွက် switchgear အတွက် ...
ဗို့အားမြင့်ဆက်သွယ်ရန် Box Insulator CH3-10Q/250
Handcart Swi အတွက် Handcart Swi အတွက် 40.5kv epoxy resin အဖုံး
အမှတ် ၂၆၊ Lingyun လမ်း၊ Dongfeng စက်မှုဇုန်၊ Liushi Town၊ Yueqing City၊ Zhejiang ပြည်နယ်၊ တရုတ်
၀၀၈၆- （၀） ၅၇၇-၆၂၇၂၂၃၇၇
©မူပိုင်ခွင့် -၂၀၂၁ - ၂၀၂၃ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု